DHAGEYSO:-Barakac xoog leh oo ka socda Tuulooyin ka tirsan degmada Cadale. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeDHAGAYSO WARARKADHAGEYSO:-Barakac xoog leh oo ka socda Tuulooyin ka tirsan degmada Cadale.
July 18, 2018 Abdirahman Al-cadaala DHAGAYSO WARARKA, WARARKA MAANTA Comments Off on DHAGEYSO:-Barakac xoog leh oo ka socda Tuulooyin ka tirsan degmada Cadale.
(Warqaat.Com)– Boqolaal qoysas xoolo dhaqato ah ayaa ka Barakacaya Tuulooyinka Guulane iyo Kaa-dheeri oo ka tirsan degmada Cadale ee gobalka Shabeelaha dhexe kadib markii ay soo weerarayn dagaalamayaasha Al-shabaab oo mudooyinkii ugu dambeeyay kula dagaalamayay degmadaasi.
Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa Warqaat.Com u sheegay in laba jeer ay Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ay ku dagaalamayn Tuulooyinkaas markii dambane ay Al-shabaab qabsadeen goobihii lagu dagaalamay waxayna halkaasi ka qaateyn xoolo halka dad badana ay ku ciqaabayaan.
717,147 total views, 2,445 views today
717,147 total views, 2,445 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
717,023 total views, 2,446 views today
717,023 total views, 2,446 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
717,052 total views, 2,445 views today
717,052 total views, 2,445 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
717,116 total views, 2,445 views today
717,116 total views, 2,445 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
717,171 total views, 2,446 views today
717,171 total views, 2,446 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]